Puntland oo sheegay inaan la Hirgalin Hesiishkii Maamulkooda iyo DF Somaliya |
Puntland oo sheegay inaan la Hirgalin Hesiishkii Maamulkooda iyo DF Somaliya
Puntland ayaa markii ugu horreysay shaaciyay inaan la hirgalin heshiiskii sanadkii hore magaalada Garoowe ku dhexmaray mas’uuliyiin dowladda federaalka ah ee Somaaliya ka socotay iyo mas’uuliyiinta maamulka Puntland.
“Heshiiskaas waxaa caqabad ku noqday khilaafka siyaasadeed ee hadda so kala dhex-galay labada dhinc ,waxaana rajaynayaa in heshiiskaas la hirgaliyo oo aysan soo bixin wax buriya “ayuu yiri wasiirka waxbarashada Puntland Cali Xaaji Warsame oo la hadlay warbaahinta gudaha.
Waxaa kaloo wasiirka uu sheegay in ay ka soo horjeedaan maamul uu sheegay in loogu magac darayo gobollada Mudug iyo Gal-gaduud,waxaana uu tilmaamay in ay socdaan dadaallo arintan looga hortagayo.
“Maamulka laga samaynayo Koonfurta Mudug iyo Galgaduud iyo intii sharcigu waa faqi karo waa u furan tahay inay ku darsadaan gobollada kale sida Hiiraan,ma jiro wax maamula oo la yiraahdo Mudug iyo Galgaduud,arrintaasi saxna ma aha qaynuunna ma aha’’ ayuu mar kale yiri wasiirka.
“Umada Soomaaliya waxay u baahan tahay in la isu soo dhoweeyo, in la walaaleeyo iyo in ciddii maamul leh oo wax qabatayna maamulkeeda lagu garab istaago,ciddii maamul dhisanaysana la isugu tago sidii loo taageeri lahaa’’ ayaa hadalladiisi kamid ahaa wasiirka.
Ugu danbayn,maamulka Puntland ayaa dhowr jeer oo hore xiriirkooda kala laabtay dowladda Somaliya ,waxaana khilaafkii ugu danbeeyay xal looga gaaray booqasho uu raysul-wasaarihii hore ee Soomaaliya ku yimid magaalada Garowe ee caasimadda Puntland.